cogeneration ကဘာလဲ? | အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ
စွမ်းအင်လောကတွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ အဲဒါကိုသုံးနိုင်တယ် ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာ နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန် (ရေနံ၊ ကျောက်မီးသွေး၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ... ) ။ ၄ င်းတို့ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ပြisနာသည်၎င်းတို့ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်မှထုတ်လွှတ်သောလေထုညစ်ညမ်းမှုဖြစ်ပြီးအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကုန်ခန်းသွားနိုင်သောအရင်းအမြစ်များဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်ကိုလည်းမှတဆင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲရင်းမြစ်များ (နေရောင်ခြည်၊ လေ၊ ဘူမိအပူစွမ်းအင်၊ ဟိုက်ဒရောလစ် ... ) နှင့်ဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်စေဘဲ၎င်းတို့သည်မကုန်ခမ်းနိုင်သောရင်းမြစ်များဖြစ်သည်။
မည်သည့်အရင်းအမြစ်မှမဆိုစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ထားသည်မှာကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ဆိုင်ရမည် စွမ်းအင်ထိရောက်မှု။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရင်းအမြစ်အနည်းငယ်ကိုအသုံးချပြီးစွမ်းအင်နှင့်အရည်အသွေးကိုလုံလောက်စွာထုတ်လုပ်နိုင်လိမ့်မည်။ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရာတွင်ယနေ့အသုံးပြုသောမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စနစ်ဖြစ်သည် Cogeneration ။
1 cogeneration ကဘာလဲ?
2 cogeneration ၏အားသာချက်များ
3 cogeneration ၏ဒြပ်စင်
4 တစ် ဦး cogeneration စက်ရုံအတွက်ဒြပ်စင်
5 cogeneration အပင်အမျိုးအစားများ
ကောင်းပြီ cogeneration သည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုမြင့်မားသောစနစ်ဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့်အပူစွမ်းအင် မူလတန်းစွမ်းအင်ကနေတစ်ချိန်တည်းမှာ။ ဤမူလစွမ်းအင်ကိုသဘာဝဓာတ်ငွေ့သို့မဟုတ်ရေနံကဲ့သို့သောကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများကိုလောင်ကျွမ်းခြင်းအားဖြင့်ရရှိသည်။
ဆိတ်ကွယ်ရာမှ cogeneration ၏အားသာချက် ၎င်း၏မြင့်မားသောစွမ်းအင်ထိရောက်မှုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့်အပူစွမ်းအင်နှစ်မျိုးလုံးကိုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုတည်းတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သမားရိုးကျနည်းဖြင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုအတွက်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အပူထုတ်လုပ်မှုအတွက်သမားရိုးကျဘွိုင်လာလိုအပ်သည်။ Cogeneration ကိုစားသုံးမှုအမှတ်နှင့်နီးသောနေရာများတွင်ပြုလုပ်သည်။ ထို့ကြောင့်လျှပ်စစ်ဗို့အားပြောင်းလဲခြင်း၊ ဝေးကွာသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်စွမ်းအင်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုခြင်းတို့ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သမားရိုးကျလျှပ်စစ်ကွန်ယက်များတွင်၎င်းတို့အကြားဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည်ဟုခန့်မှန်းရသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၏ 25 နှင့် 30% သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစဉ်အတွင်းထုတ်ပေး။
Cogeneration ထိရောက်မှု။ ရင်းမြစ် :: http://www.absorsistem.com/tecnologia/cogeneracion/principio-de-la-cogeneracion
သမားရိုးကျလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုတွင်၎င်းကိုလျှပ်စစ်မော်တာ (သို့) တာဘိုင်တစ်ခုမှမောင်းနှင်သောဓာတ်အားပေးစက်မှထုတ်လုပ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်လောင်စာဓာတုစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ ၎င်းသည်၎င်း၏အပူစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၅% မှ ၄၀% သာလျှင်၊ ကြွင်းသောအရာအပူ၏ပုံစံအတွက်ပျောက်ကွယ်သွားရမည်ဖြစ်သည်ကတည်းက။ သို့သော် cogeneration စနစ်သည် ပို၍ ထိရောက်သည်။ မျိုးဆက်စဉ်အတွင်း, သင်၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါတယ် စွမ်းအင်၏ 70% ရေပူနှင့် / သို့မဟုတ်အပူထုတ်လုပ်မှုမှတဆင့်။ အပူစွမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများတွင်ပင်ဖိအားပေးသောရေနွေးငွေ့ကို သုံး၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထပ်မံထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါများကိုဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းသည် cogeneration ၏အဓိကလက္ခဏာများကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပြနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ထုတ်လုပ်သည့်စွမ်းအင်အမျိုးမျိုး၏အားသာချက်ကိုယူနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်သမားရိုးကျစင်တာတစ်ခုထက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည်။ ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုနည်းနည်းကူညီပေးတယ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေရှည်တည်တံ့ရေး။ ၎င်းတို့သည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုနည်းစေရန်ကူညီသည်၊ ထို့ကြောင့်ကုန်ကြမ်းပမာဏနည်းပါးသည်။ ၎င်းသည်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်းလျော့နည်းစေသည် ယှဉ်ပြိုင်မှုတစ်ခုတိုးလာ ထုတ်လုပ်သူများအတွက်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာသုံးစွဲမှုနည်းလေလေပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနည်းလေလေ၊ သုံးစွဲမှုနှင့်နီးသောနေရာများတွင်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အခြေခံအဆောက်အအုံများထုတ်လုပ်သောအခါကုန်ကြမ်းနှင့်နေရာများကိုလည်းသက်သာစေသည်။
ရင်းမြစ် - http://www.cogeneramexico.org.mx/menu.php?m=73
cogeneration ၏အဓိကဒြပ်စင်ဖြစ်ပါတယ် ဓာတ်ငွေ့သို့မဟုတ်တာဘိုင်အင်ဂျင်။ ကျွန်ုပ်တို့ cogeneration နှင့်ယင်း၏ application များစွာအကြောင်းပြောဆိုသည့်အခါတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤမူလတန်းနှင့်စတင်လေ့ရှိသည်။ အချို့သောအမျိုးအစားများအတွက် cogeneration မှထုတ်လုပ်သောစွမ်းအင်လေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်အတွက်စက်အမျိုးအစားနှင့်လိုအပ်သောစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်နိုင်သောအရွယ်အစားကိုဆုံးဖြတ်ရန်အပူလိုအပ်ချက်ကို ဦး စွာတွက်ချက်ရမည်။
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအချက်မှာထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်၏လိုအပ်ချက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစဉ်ကာလအတွင်း၎င်းတို့သည်လက်ရှိလိုအပ်ချက်များကိုလေ့လာရန်ကန့်သတ်မထားသင့်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာအပူစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုပြောင်းလဲခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေများကိုအနာဂတ်ဆန်းစစ်လေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရမည်။ ပိုပြီးထိရောက် ထို့ကြောင့်စီးပွားရေးအရပြောရလျှင်ပိုမိုအကျိုးအမြတ်ရနိုင်သည်။
တစ် ဦး cogeneration စက်ရုံအတွက်ဒြပ်စင်
cogeneration စက်ရုံတစ်ခုတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများဖြစ်သောကြောင့်အများအားဖြင့်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ သူတို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အောက်ပါတို့ရှိသည်။
အားလုံး၏အရေးအပါဆုံးအရာမှာ အဓိကအရင်းအမြစ် အရာကနေကျနော်တို့စွမ်းအင်ရရှိပါလိမ့်မယ်။ ဤကိစ္စတွင်သူတို့သည်သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ဒီဇယ်နှင့်လောင်စာဆီများကဲ့သို့ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများမှလာသည်။
နောက်ထပ်အလွန်အရေးကြီးသောဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်သည် မော်တာ။ ၎င်းသည်အပူသို့မဟုတ်ဓာတုစွမ်းအင်ကိုစက်မှုစွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ တပ်ဆင်မည့်စက်ရုံအမျိုးအစားနှင့်၎င်းကိုပေးမည့်အသုံးပြုမှုပေါ် မူတည်၍ ဓာတ်ငွေ့တာဘိုင်၊ ရေနွေးငွေ့သို့မဟုတ်အခြားအင်ဂျင်များကဲ့သို့အင်ဂျင်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိသည်။
တစ် ဦး က cogeneration စက်ရုံလိုအပ်ပါတယ် စက်မှုစွမ်းအင်အသုံးချမှုအတွက်စနစ်။ များသောအားဖြင့်၎င်းသည်စွမ်းအင်ကိုလျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးသော alternator တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်အသုံးပြုမှုစနစ်သည်ဖိအားတစ်ခုသို့မဟုတ်စက်မှုစွမ်းအင်ကိုတိုက်ရိုက်အသုံးပြုသောစုပ်စက်ဖြစ်သည့်ကိစ္စများလည်းရှိသည်။
သင်လည်းလိုအပ်သည် အပူအသုံးချမှုစနစ် ထုတ်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထွက်ရှိလာသောဓာတ်ငွေ့များမှအပူကိုပြန်လည်ရယူရန်တာ ၀ န်ရှိသည့်ဘွိုင်လာများကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်အခြောက်ခံစက်သို့မဟုတ်အပူလဲလဲဖြစ်နိုင်သည်။
cogeneration သည်အလွန်ထိရောက်သော်လည်းစွမ်းအင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမပါရှိပါ။ အဲဒါကြောင့်လိုအပ်တာပေါ့ အအေးစနစ်။ အပူစွမ်းအင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်စက်ရုံတွင်အသုံးမပြုပါက၎င်းအပူကိုစွန့်ပစ်ရမည်။ အအေးခံတာဝါတိုင်များကိုဤအတွက်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်လေထုထဲသို့စွန့်ပစ်သောအပူပမာဏကိုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်သောဓာတ်ငွေ့ရည်ဘူးသို့မဟုတ်အပူလဲလဲဖြစ်နိုင်သည်။
ဒါဟာကြာပါတယ် ထိန်းချုပ်မှုစနစ် အဆိုပါအဆောက်အ ဦ များဂရုစိုက်ရန်။
cogeneration စက်ရုံတွင်သင်မလွတ်နိုင်ပါ လျှပ်စစ်စနစ် စက်ရုံ၏အရန်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာစွမ်းအင်မျှတမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သောလျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကိုတင်ပို့ခြင်းသို့မဟုတ်တင်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စက်ရုံအားပြင်ပကွန်ယက်မှလျှပ်စစ်ချို့တဲ့သောအခြေအနေများတွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြည့်တင်းပေးရန်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုအခြေအနေများပြန်လည်ရရှိသောအခါချက်ချင်းရရှိနိုင်ပါသည်။
cogeneration နှင့်သမားရိုးကျမျိုးဆက်အကြားခြားနားချက်များ။ စမ်းရေတွင်း; http://new.gruppoab.it/es/guia_cogeneracion/cogeneracion.asp
ကျွန်ုပ်တို့ cogeneration အပင်များ၏အရေးအပါဆုံးသောအရာများကိုသိရှိပြီနှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့တည်ရှိနေသောအပင်အမျိုးမျိုးကိုမြင်တွေ့ရမည်။
ဓာတ်ငွေ့အင်ဂျင် cogeneration စက်ရုံ။ ၎င်းတွင်သူတို့သည်လောင်စာအဖြစ်အသုံးပြုကြသည် ဓာတ်ငွေ့၊ ဒီဇယ်နှင့်လောင်စာဆီ။ ၎င်းတို့သည်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကိုထုတ်လုပ်ရာတွင်အလွန်ထိရောက်သော်လည်းအပူစွမ်းအင်ကိုထုတ်လုပ်မှုသည်နည်းပါးသည်။
ဓာတ်ငွေ့တာဘိုင် cogeneration အပင်။ ဤအပင်များတွင်လောင်စာကိုမီးရှို့သည် တစ် ဦး တာဘိုမီးစက်။ စွမ်းအင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသည်။ ၎င်းကို Alternator ၏အကူအညီဖြင့်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ သူတို့၏လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်သည်အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်သည့်အင်ဂျင်များထက်နိမ့်သော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည်အားသာချက်ရှိသည်။ အပူချိန် ၅၀၀ ံစင်တီဂရိတ်ခန့်ရှိသောအပူချိန်ရှိသည့်၎င်း၏လောင်ကျွမ်းနေသောဓာတ်ငွေ့များတွင်အပူကိုအလွယ်တကူပြန်လည်ရယူနိုင်ရန်အားပေးသည်၊ ဘွိုင်လာ
ရေနွေးငွေ့တာဘိုင်နှင့်အတူ Cogeneration အပင်။ ဤစက်ရုံအမျိုးအစားတွင်စက်မှုစွမ်းအင်ကိုထုတ်လုပ်သည် မြင့်မားသောဖိအားရေနွေးငွေ့၏ချဲ့ထွင် ဒါကသမားရိုးကျဘွိုင်လာကနေလာတာ ဤတာဘိုင်ကိုဤကဲ့သို့သောအမျိုးအစားများသည် cogeneration တွင်ပထမဆုံးအသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့သျောလညျး, ယနေ့၎င်း၏လျှောက်လွှာထိုကဲ့သို့သောဇီဝလောင်စာအဖြစ်ကျန်နေတဲ့လောင်စာကိုအသုံးပြုသောတပ်ဆင်ရန်အပိုဆောင်းအဖြစ်ကန့်သတ်ထားသည်။
သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်ရေနွေးငွေ့တာဘိုင်နှင့်အတူပေါင်းစပ်သံသရာအတွက် Cogeneration စက်ရုံများ။ ဓာတ်ငွေ့နှင့်ရေနွေးငွေ့တာဘိုင်များအသုံးပြုခြင်းကိုခေါ်သည် "ပေါင်းစပ်သံသရာ" ။
ပေါင်းစပ်သံသရာ cogeneration စက်ရုံ
သဘာဝဓာတ်ငွေ့အင်ဂျင်နှင့်ရေနွေးငွေ့တာဘိုင်နှင့်အတူ Cogeneration စက်ရုံများ။ ဤစက်ရုံအမျိုးအစားတွင်အင်ဂျင်အငွေ့မှထွက်သောအပူကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးသောဘွိုင်လာဖြင့်ပြန်လည်ရရှိသည်။ ၎င်းသည်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သို့မဟုတ်စက်မှုစွမ်းအင်ပိုမိုထုတ်လုပ်ရန်ရေနွေးငွေ့တာဘိုင်တွင်အသုံးပြုသောရေနွေးငွေ့ကိုထုတ်လုပ်သည်။
ငါတို့မြင်ခဲ့သည့်အတိုင်း cogeneration သည်အားသာချက်များစွာရှိသည်။ ၎င်းတို့မှရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများကို အခြေခံ၍ စာရင်းပြုစုပါသည်။
တိုင်းပြည်နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများ။ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိကစွမ်းအင်ချွေတာသည်။ လေထုအတွင်းရှိလေထုညစ်ညမ်းမှုကိုလျှော့ချပြီးအလုပ်အကိုင်ဖန်တီးရေးကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဖန်တီးသည်
cogeneration မှကျူးလွန်သောအသုံးပြုသူအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများ။ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု၏ပိုမိုထိရောက်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရ။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ လျှပ်စစ်ဥပဒေကြမ်း၏စျေးနှုန်းကျဆင်း။ ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျော့နည်းစေသည်။ စွမ်းအင်လုပ်ငန်းစဉ်တွင်အရည်အသွေးမြင့်မားသောကြောင့်ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုမြင့်တက်စေသည်။
ထောက်ပံ့သောလျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများ။ စွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်လျှပ်စစ်ကဏ္inတွင်စီမံကိန်းရေးဆွဲမှုပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။
ဤအရာအားလုံးနှင့်အတူကျွန်ုပ်သည်သင့်အားစုပေါင်းထုတ်လုပ်သည့်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အားအကြောင်းကြားနိုင်ပြီး၎င်းသည်သင့်အတွက်အသုံးဝင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » နည်းပညာအသစ်များ » cogeneration ကဘာလဲ?